I-Haka - New Zealand Maori War Chant
I-Australia ne-New Zealand E-New Zealand
Uma ubonile umdlalo wezinyunyana zombhoxo neqembu laseNew Zealand, bonke abaNtsundu, ngabe usubonile i-ha.
I-All The Blacks ihlanganisa ithimba leNyuvesi yaseNew Zealand kanye nabanqobi bokuqala beNdebe Yomhlaba Yombhoxo we-Quadrennial eyabanjelwa ngo-1987 nezwe ezingu-16 emncintiswaneni.
Eqinisweni, leli gama elithi ha libhekisela ngokwemvelo kuwo wonke umdanso waseMaori kodwa manje selusho ukubuyiswa komdanso wamaMori lapho amadoda ahamba phambili nabesifazane bebolekela ukwesekwa kwezwi ngemuva.
I-War Chant neNselele
Kodwa bonke abaNtsundu abagqugquzela inguqulo eyodwa ye-hayi eqala ngomsindo "Ka mate, ka mate (Kuyinto ukufa, ukufa"), yilokho, okuthiwa yi-Te Rauparaha's (okuthiwa yi-origin of their originally originated ) ukuthi abantu abaningi, ikakhulukazi abalandeli bebhola lezinyawo zebhola lezinyawo, bayazi ukuthi i - ha.
Le nguqulo ye-hayi ingumculo wezempi futhi inselelo futhi ijwayele ukuqhutshwa yi-All Blacks ngaphambi kwemidlalo emikhulu ngokumelene namaqembu angewona eNew Zealand.
Kubonakala ngokukhamuluka okukhulu, ukuthukuthela okukhulu kwezingalo nokukhwabanisa kwezinyawo, ukubukeka okubuhlungu futhi, ekugcineni, ukuthukuthela kukhishwa izilimi.
I-All The Blacks version ye-haka kuthiwa ivela kuTe Rauparaha (1768-1849), inhloko yesizwe saseAnga Toa kanye nenye yezinduna ezinkulu zokugcina zaseNew Zealand . U-Rauparaha wanquma ukuthungula kusukela ku-Waikato kuya eSouth Island lapho abalandeli bakhe babulala khona abahlali baseYurophu nabaseMaori aseNingizimu.
I-ha yakhe kuthiwa yatholwa phakathi nesikhathi uTe Rauparaha ebalekela ezitheni zakhe, efihlwe ensimini yamazambane ngobusuku obubodwa futhi evukile ekuseni ukuze kukhulunywe ngenduna enesihawu ukuthi izitha zakhe ziye zahamba. Wabe esebenza ngokunqoba kwakhe.
Ngomlingani, ngishade naye
Amazwi ka-Te Rauparaha's kaka (1810) asetshenziswa yi-All Blacks:
Ngesinye isikhathi, ka-ora
U-Nana ungumuntu owaziyo
I-Whiti te ra.
Lawa magama ahunyushwa ngokuthi:
Kuyinto ukufa, ukufa
Kuyinto yokuphila, kungukuphila
Lona ngumuntu onoboya
Ngubani owabangela ukuba ilanga likhanye futhi kimi
Phakamisa isiteji, phezulu kwesiteji
Kuze kube phezulu
Amaphuzu avelele eNorthland: Izinto Ezinhle Okubhekayo Nokukwenza
Mount Cook Village: Vakashela Isifunda seNew Zealand ephakeme kunazo zonke
I-Freedom and Wild Camping eNew Zealand
Ubulili nokuHlala eNew Zealand
Amapulazi Ahamba phambili e-Peninsula yaseCoromandel
Yini Okumele Uthayiphe Inyanga eNew Zealand
2018 Izigxobo Zama-Polar eMadrid naseVirginia
Lapho Uzobona Izibani Zeholide e-Raleigh-Durham
5 Rhode Island RV Parks Okumele Uvakashele
Amahhotela e-Disneyland Resort e-California
Izithombe zeJamaica, Queens
Ama-Shack Shacks Aseduze ne-Montreal: I-Cabane à-Sucre Paquette
I-Jazz ePaki - iPark Rockfront Park
I-Wilton Manor Stonewall ne-Gay Pride 2017
I-Bookworms: Izitolo Zamasitolo Ezizimele ZaseNorth Jersey
I-Cleveland Area Imisakazo Yomsakazo
Okumele Uthayiphe Uhambo oluya e-Seattle
U-New Year Eve e-Minneapolis / St. UPawulu
Okuningi Mesa Beach
Amakhulu ama-Great Greats eNew Zealand